Ukubeka ezona Zona ndawo ziSebenzayo zeSixhenxe kwi 'Point Break' - Iimuvi
Ukubeka ezona Zona ndawo ziSebenzayo zeSixhenxe kwi 'Point Break'
Ixesha le-2020 lehlobo le-blockbuster libanjiwe ngenxa yobhubhane, kodwa oko akuthethi ukuba asinakho ukubhiyozela imovie zangaphambili esasizikhuphela ngaphandle elangeni nakwimeko yomoya. Wamkelekile kwi Umkhombe ’S Buyela kwiXesha leBlockbuster yeXesha , apho siza kubonisa iiklasikhi zasehlotyeni ezahlukileyo veki nganye.
Yimbali endala njengexesha elidlulileyo: Owayesakuba yinkwenkwezi kwikota yokuqala owaphuma edolweni ngaphambi kokuba ahambe ujoyine i-FBI, kwaye unoxanduva lokungena kwiqela labaphangi beebhanki ze-surfer (!) Abachitha iminyaka bebaleka abasemagunyeni. Zimbalwa iifilimu zamanyathelo ezinendawo ephefumlelweyo njengoko Ukuqhekeka kwenqaku -Kwaye bambalwa abasamkelayo ithemba lokufuna uyolo kunye nokuphila ngenzondelelo ngokunyaniseka okunje. NjengoKeanu Reeves's quarterback-cum-FBI-arhente uJohnny Utah-igama elihlala lixesha lonke-eliwela kancinci phantsi kwepelo likaPatrick Swayze's Bodhi, nathi ke. Ukuqhekeka kwenqaku imigaqo engathandabuzekiyo.
elona xesha libi
Kodwa ayisiyiyo kuphela intanda-bulumko eyenzayo Ukuqhekeka kwenqaku iklasikhi: Ifilimu kaKathryn Bigelow iphila kwaye isweleka kunye nabalinganiswa abathandayo ukufa. Nokuba lixesha lokukhwela iliza elikhulu, ukuphanga ibhanki kwimaski yeNixon, okanye utsibe kwinqwelomoya, Ukuqhekeka kwenqaku ayibambi. Okanye, ukucaphula uBodhi ngokwakhe: Ukuba ufuna okokugqibela, kuya kufuneka uzimisele ukuhlawula elona xabiso liphezulu. Ke imbeko yomnye wee-blockbusters ezinqabileyo zasehlotyeni, sikwisikhundla Ukuqhekeka kwenqaku ’Ulandelelwano oluninzi olubangelwa yiadrenaline. (Umchithi: Ukutsiba ngaphandle kwenqwelomoya ngaphandle kweparashute kuya kuba kwinqanaba eliphezulu kuluhlu.)
'Ukuphuka kweNqaku' Ngaba yeyona Classic ibalaseleyo
7. Ibhola ekhatywayo
Ibhola ekhatywayo yaselwandle inokuba mbumbulu, kodwa hayi xa udlala neqela le-adrenaline junkies kunye ne-dude enokuba yinkwenkwezi ye-NFL ukuba idolo lakhe alonakalanga. Kuninzi ongakuthanda ngomdlalo kaJohnny Utah kule ndawo: Unobukho bokwenyani epokothweni, uhamba kamnandi, kwaye simfumana esenza ukuphosa ngaphandle komdlalo wokudlala. Waye wafunyanwa yi-Bodhi ubuncinci kube kanye, nangona kunjalo. (Ngamagqabantshintshi, iBodhi ibalekisa iQB njengenkulumbuso kaJulius Peppers.) Kodwa ngalo rokethi yengalo yasekhohlo, uJohnny Utah usenokuba nguSteve uSteve Young.
Iingxaki zekota-ziyeke abo bafumana ukonzakala emsebenzini-abaziwa ngokwenza kwabo amandla, kodwa ikhredithi apho kufanelekileyo: UJohnny ubeka umzimba wakhe emgceni wokuthumela iBodhi ukuba ityumke kumaza.
Ukuba oku kwenzekile kwigridi yodumo, i-Utah iyakubhengezwa ngoburhabaxa ngokungeyomfuneko; kumanxweme e-LA, nangona kunjalo, ukujongana ngokuqaqambileyo elwandle kufana nesiko lokuhamba. Abahambi ngeenyawo bayaqonda ukuba babedlala nabo i UJohnny Utah, kwaye le arhente ifihlakeleyo inokuxhoma. Ilihlazo lonke ukuphangwa kwento yeebhanki kwindlela yemidlalo yebhola ekhatywayo.
6. Ugqogqo lweNdlu ye-FBI
Kwikota yangaphambili, uJohnny Utah akayikhathalelanga ingxelo ebanzi yokuhlola. Ukrokrela ukuba iqela labantu abathengisa iziyobisi ngoo-Ex-Mongameli-abaphangi beebhanki abanobuchule abanxibe iimaski zikamongameli ngexesha le-heists-kunye no-Gary Busey's Angelo Pappas, iqabane likaJohnny, likhokelela kugqogqo ekhayeni labo. Yintlekele, ikakhulu kuba ummelwane waye… esebenzisa isixhobo sokucheba ingca kwaye yayiyinyani, ingxola. (Ukuba umshini weloni inokuphazamisa i-FBI, iarhente inokuba neengxaki ezinkulu.)
Umatshini wokucheba ingca uthintela uJohnny ukuba angalumkisi ezinye iiarhente zokuba abantu abatyibilikayo baxhobile kwi-walkie-talkie yakhe, kwaza emva koko kwalandela udubedube. Ukuba ukudubula okusemgangathweni akuvakali gnarly kuwe, ndingathanda ukongeza ukuba omnye wabafazi endlini uphuma kwindawo yokuhlambela eyothusayo kwaye ubetha ikaka kuJohnny, eyayiyimbonakalo. (Awu, ulandelelwano alufanelanga i-GIF kuba uhamba ze ngokupheleleyo.) Kwaye loo mtshini wengca utyhafisayo uphantse wakhupha ubuso bukaJohnny obenziwe ngokugqibeleleyo.
Ukucinga ukuba konke oku ngekhe kuthintelwe ukuba i-FBI kunye ne-DEA banxibelelana; ngearhente ye-DEA efihlakeleyo, aba batyibilikisi babenento yokwenza nokuphanga. Ngethamsanqa likaJohnny akazange abhujiswe. (Kulungile, ndiza kuyeka ngebhola ekhatywayo.)
5. OoMongameli bangaphambili banyanzela uJohnny ukuba aphange iBhanki kunye nabo
Ngaba akuthiyanga xa i-surfer archnemesis ixhwila uthando lwakho kwaye isoyikisela ukuba ibulawe ngaphandle kokuba wena-owayesakuba yinkwenkwezi yekota kunye nearhente ye-FBI efihlakeleyo engakulungelanga ukuhlala efihlakele-ube liqabane lokuphanga ebhankini? UJohnny wayengenayo enye indlela ngaphandle kokuhamba ngesikimu seBodhi, nanjengoko iikhamera zokhuseleko zazinokumbamba njengowona kuphela umphangi ongenayo imaski. Kodwa oku kuphanga kuhamba ngokungalunganga kwehla kwi-Bodhi's hubris.
Esikhundleni sokuba aba-Ex-Presidents banamathele kwixesha labo eliqhelekileyo-ngaphakathi nangaphandle kwebhanki ngaphakathi kwemizuzwana engama-90, kwaye bangaze baye kwi-vault-iBodhi iyabawa kwaye ichitha ixesha elongezelelweyo kwivenkile. (Ndingacinga ukuba ufuna imali engaphezulu ngenxa yokuba iqweqwe LA leqela livuthelwa ikamva elibonakalayo.) Ipolisa elingasebenziyo eliphakathi kwabathinjiweyo lifikelela kumpu walo; kuqhuma uqhushululu. Ipolisa kunye nonogada webhanki bayafa, kunye noGrommet, elona gama lomnye wabahlobo baka-Bodhi be-surfer-bangaphazami uphawu lobumba .
Ngaba konke oku kunokuthintelwa ukuba iBodhi ayiyanga kwigumbi? Mhlawumbi akunjalo; Ipolisa elingasebenziyo lalifuna ukudlala iqhawe ngokwenene. (I-inshurensi igubungela imali elahlekileyo kwezi bhanki, ungaphulukani nobomi bakho kuyo!) Kodwa aba-Mongameli bangaphambili babemiselwe ukuba baphazanyiswe ngaxa lithile. (Khange nditsho ukuba ndiyekile ukusebenzisa i-puns kamongameli.)
Ikonsathi yedesika encinci yegucci mane
4. Ukuntywila esibhakabhakeni ngeParachute
Ngubungqina kububanzi bebonke Ukuqhekeka kwenqaku ukuba umhlaba obhabha ngesikwere embindini wolu luhlu, kodwa oko akuthethi ukuba umzuzu wawungaphefumli. Into endiyithandayo kakhulu ngolu landelelwano kukuba uJohnny kunye nabahambi ngenyawo bakhawuleze kangakanani- bayazi ngoku ukuba ungummeli ofihlakeleyo; UJohnny uyazi ukuba ngoo-Ex-Presidents-inguquko ukusuka kukungathembani kwabo bobabini ukuya kubumnandi obunyulu. Isidudu sam saye saya ekubeni yiparaoid yokuba abo batyibilikisayo bangcungcuthekisa iparashute yakhe (iyaqondakala!) Ukujoyina izandla embindini wesibhakabhaka.
Iimpawu ezintle azihlali ixesha elide-kuxa nje befika apho uBodhi exelela uJohnny ukuba bathumbe intombazana yakhe-kodwa iyathetha Ukuqhekeka kwenqaku I-ethos engenankathalo yokuba wonke umntu angabeka bucala umahluko wabo ukonwabela ukungxama kokutsiba kwinqwelomoya. Ndiza kubukela i-movie epheleleyo, engenangxabano engoJohnny noBodhi nje ukubhakabhaka, ukutshiza, ukutshaya, nokuthetha ngoMama Omkhulu woMhlaba osikhusela sonke.
3. Ukuphangwa kweBhanki / ukuXoshwa kweenyawo
Oko kwathiwa: Impixano iyagula, nayo. Umntu ophambili kulungelelwaniso olugqwesileyo lwefilimu-kwaye yenye yezona zinto zintle ezenziwayo ze-90s-, ngaphandle kwembuzo, uJohnny uleqa uBodhi kwimaski kaReagan emva komnye wabaphangi baka-Ex-Presidents. Ukwenza ifilimu ngobuhle kweBigelow kunika ukugxothisa okungxamisekileyo, kunye nokubona iBodhi-okanye, ngokuchanekileyo, UPatrick Swayze uphinda kabini -Ukuhamba kwakhe ngasemva kwezitalato kunye nezitrato ezixakekileyo azide ziguge. Ayikho enye into ehlekisayo ngaphandle kukaBodhi elinde uJohnny ukuba ambambe, kuphela ukuphosa inja yokoqobo ebusweni bakhe.
Ukuleqwa kufikelela esiphelweni ngoJohnny ephinda ehlaziya idolo lakhe, kwaye engavumi ukudubula iBodhi ebalekileyo-endaweni yoko ethula umjikelo ophelele esibhakabhakeni, ecaphukile kuba engakwazi ukushukumisa bromance yabo. Into emnandi: Ndinempendulo efanayo kolu luhlu njenge UNick Frost ungene UFuzz oshushu .
2. Isibhakabhaka Ngaphandle iparashute
Khawufane ucinge ngenkqubo yokungena ngokutsiba ngaphandle kwenqwelomoya ngaphandle kweparashute. Mhlawumbi phaya ayikho Nye. Ngayiphi na imeko, ngobomi bakhe busemgceni nothando lobomi bakhe-uxolo, ubundlongondlongo bakhe uBodhi-ebaleka ngeparashute, uJohnny Utah uthatha oyena mntu ungcakazo. Andiqinisekanga ukuba zeziphi iingxaki zokutsiba ngaphandle kwenqwelomoya, ukubambelela komnye umntu osele enomoya, kwaye ubambelele kubomi obuthandekayo xa bevula iparashute yabo, kodwa uJohnny wabangxolisa kwaye waqinisa inqanaba lakhe njenge-adrenaline junkie ilivo. Xa nkqu neBodhi ichukumisekile, awoyiki ukufa ngokwenza into oyithandayo.
Kulapho ke Ukuqhekeka kwenqaku incopho yokwenene. Ndiyathemba ukuba oku akuniki UTom Cruise ezinye iimbono .
1. Ukujonga iSiphepho seminyaka engama-50
Yintoni enokuba yinto egqithileyo kunokutsiba ngaphandle kwenqwelomoya ngaphandle kweparashute? Oku kunokuba yinto enokuphikiswa ngayo kwabanye Ukuqhekeka kwenqaku abathandi, kodwa iBodhi isasaza amaza esiqhwithi seminyaka engama-50 ngu izinto zentsomi. Kukho i-feat uqobo-ikhwele iliza elingenakuthelekiswa nanto elibukeka ngathi lilikhulu le-skyscraper-kwaye inyani yokuba iBodhi yavuma ukubetha itikiti lendlela. Esikhundleni sokuphila ubomi bakhe bonke emva kweentsimbi, uBodhi wanamathela kwifilosofi yakhe. Kuye, kwakungcono ukutshisa ngaphandle kokuphela.
Kwaye ke uBodhi, ngokusisiseko, wasinga ekufeni kwakhe- yeyona ndlela yesibongo yokuba ududebro wasentsomini afezekise isiphelo sakhe. Ukutshatisa ukufezekiswa kweBodhi kuya kuba kukwamkela ukufa ngezandla ezivulekileyo; Ngombulelo, uJohnny Utah ubonakala elungisa ukulahla ibheji kunye nokuhlala simahla esiphelweni kumdlalo bhanyabhanya. Kuyi-surf ye-epic, kwaye ngelixa umzuzu uziva ubumuncu, uBodhi wathi kungcono: Akubuhlungu ukufa usenza into oyithandayo. Ngaloo ngcamango, ndicinga ukuba ndiza kufa ndidla i-bagels?
udade omncinci kubafazi abancinci
mnyama (uthotho lweTV)
iinkampani ezivelisa imiboniso erhuqwayo
Idrake im yomsindo wevidiyo yomculo
Umdlalo weetrone podrick brothel
Imuvi yokuthengisa kunye nealec baldwin